မန်စီးတီးဟာ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး အသင်း ဆိုပြီး မှတ်ချက်ပေးလိုက်တဲ့ ယာဂန်ကလော့ - Sports Myanmar
November 9, 2019 - by Editor
လီဗာပူး မန်နေဂျာ ယာဂန်ကလော့က မန်စီးတီးဟာ ကမ္ဘာ့ဘောလုံး လောကရဲ့ အကောင်းဆုံး အသင်း ဖြစ်တယ်လို့ ၀န်ခံ သွားခဲ့ ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း လီဗာပူး ဟာ စီးတီး ကို မနက်ဖြန် အန်ဖီးမှာ အနိုင်ယူ ပြနိုင်စွမ်း ရှိတယ်လို့ ဆိုလိုက်ပါတယ်။ လီဗာပူးဟာ မနက်ဖြန် အန်ဖီးမှာ မန်စီးတီး နဲ့ ရင်ဆိုင် ကစား သွားရမယ့် စူပါဆန်းဒေး ပွဲစဉ်မှာ အနိုင်ရခဲ့မယ် ဆိုပါက ပရီးမီးယားလိဂ် ဇယား ထိပ်မှာ ၉ မှတ် အသာနဲ့ ဦးဆောင် သွားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီပွဲမှာ ကလော့ ရဲ့ အသင်း အတွက် အားတက် စရာ ကတော့ မန်စီးတီး ဟာ အဓိက ကစားသမား ၆ ဦး ကို အထိ ဒဏ်ရာ ပြသနာ ကြုံတွေ့ နေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း လီဗာပူး နည်းပြက စီးတီးဟာ သူ့အသင်းထက် သာနေ ဆဲလို့ ၀န်ခံ သွားခဲ့ ပါတယ်။
ကလော့ က “ကျွန်တော်တို့ ကမ္ဘာ့ အကောင်းဆုံး အသင်းကို အနိုင်ယူ နိုင်စွမ်း ရှိသလား? အမှန်ပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ လုပ်နိုင် ပါတယ်။ အကယ်လို့များ ကိုယ်ဟာ ကမ္ဘာ့ အကောင်းဆုံး အသင်းကို အနိုင် ရရှိ ခဲ့မယ် ဆိုရင် ဒါဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကမ္ဘာ့ အကောင်းဆုံး အသင်း ဆိုတဲ့ ခံစားချက်ကို ရစေ ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် normal day မှာတောင် စီးတီးဟာ ခြေတစ်လှမ်း သာနေဆဲလို့ ကျွန်တော် ယူဆပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကျွန်တော် အရှိထက် သေးငယ်အောင် မလုပ်ချင် ပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ဟာ အကြိမ် တော်တော် များများ မယုံနိုင် လောက်အောင် စွမ်းဆောင် ပြထား လို့ပါ။
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ တိုးတက်ဖို့ လာအုံးမယ့် နေရာတွေ ရှိနေ ပါသေးတယ်။ ဒီအချိန်မှာ ကိုယ်ဟာ ဘာလဲ ဆိုတာ သိပ်ပြီး အရေး မပါပါဘူး။ အရေးကြီး တာက အနာဂတ်မှာ ကိုယ်ဘာဖြစ် လာနိုင်မလဲ ဆိုတာ ပါပဲ။ ဒါဟာ ကျွန်တော်တို့ကို မသေးသိမ် စေပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ မန်စီးတီး ကို အနို်င်ယူ ပြချင်ဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။’ လို့ ဆိုလိုက် ပါတယ်။
လီဗာပူး အသင်းဟာ လာမည့် နိုင်ငံတကာ ပွဲစဉ်တွေ မတိုင်မီ ပရီးမီးယားလိဂ် top6အသင်းတွေ အားလုံး နဲ့ ကစား ပြီးသွားမှာ ဖြစ်ပြီး ချန်ပီယံလိဂ် ဖလား ပိုင်ရှင်ဟာ အာဆင်နယ် ၊ ယူနိုက်တက် ၊ တော့တင်ဟမ် ၊ ချဲလ်ဆီး တို့နဲ့ ရင်ဆိုင် ခဲ့ရာမှာ အမြင့်ဆုံး ရမှတ် ၁၂ မှတ် ကနေ ၁၀ မှတ် အထိ ရယူနိုင် ခဲ့ပြီး စီးတီး ကတော့ top6အသင်းတွေ ထဲမှာ စပါး နဲ့သာ ကစား ခဲ့ရသေးပြီး ၂ ဂိုးစီ သရေကျ ခဲ့ပါတယ်။
Liverpool’s players celebrate winning the UEFA Super Cup 2019 football match between FC Liverpool and FC Chelsea at Besiktas Park Stadium in Istanbul on August 14, 2019. (Photo by Bulent Kilic / AFP)
ဒါနဲ့ ပက်သက်ပြီး ကလော့က “ကျွန်တော်တို့ အခြား အသင်းတွေရဲ့ ပွဲတွေကို ဘယ်တော့မှ မတွေး ခဲ့ပါဘူး။ အိုကေ အခု ကျွန်တော်တို့ ဒါကို သုံးသပ်ပါမယ်။ ကျွန်တော် အခြား အသင်းတွေရဲ့ ပွဲတော်တော် များများ မကြည့် ခဲ့ပါဘူး။ လာမည့် ပွဲကတော့ အရမ်း အရေးကြီးတဲ့ ပွဲဆိုတာ ကျွန်တော် သိပါတယ်။ ဒီပွဲပြီးရင် ၃ မှတ် ၆ မှတ် ဒါမှမဟုတ် ၉ မှတ် တစ်ခုခု ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ ဘယ်အချက်ကမှ ဒီလိဂ်ကို ပွဲပြီးသွားစေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ၃ ၆ ၉ ဆိုတဲ့ ကိန်းဂဏန်း တစ်ခုခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီနောက် ကျွန်တော်တို့ ပွဲတွေ ထပ်ကစား ရအုံးမှာပါ။ ကျွန်တော်တို့ ပြသနာတွေ ကြံုလာ ရနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ ရှင်းပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ဒါတွေကို ဘယ်လို ဖြေရှင်း သွားရမလဲ? ဒါဟာ ဘောလုံး မကစားတဲ့ လူတွေ အတွက်ပဲလို့ ကျွန်တော် ယူဆပါတယ်။ တစ်ဦးက တစ်မျိုးပြောပြီး အခြားလူတွေက သူတို့ဟာ ခြေချော် သွားခဲ့ပြီလို့ ပြောကြပါတယ်။ သူတို့ ပြောနေတာ တွေကိုသာ နားထောင်မယ် ဆိုရင် ရူးသွားမှာပါ။ ဒါဟာ ကျွန်တေ်ာတို့ အတွက် အရေးမပါပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ပြိုင်ဘက်ကိုပဲ အပြည့်အဝ အာရုံစိုက်ထားပြီး သူတို့ နိုင်ငံတကာ ပွဲစဉ်တွေ ပြီးနောက် ကြံ့့ခိုင်မှု အပြည့်နဲ့ ပြန်လာဖို့ မျှော်လင့် ထားပါတယ်။ အဲဒီနောက် ဒီရာသီမှာ အရမ်းကို အရေးကြီးတဲ့ ခရစ်စတယ်ပဲလေ့စ် နဲ့ ပွဲကို သွားကစား ရပါမယ်။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ဒီပွဲဟာ ဒီလိုမျိုးပါ။
ကျွန်တော်တို့ အနိုင်ရချင် ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အကယ်၍ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ခဲ့မယ် ဆိုရင်လည်း ချန်ပီယံတော့ ဖြစ်နေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ရှံုးနိမ့် ခဲ့မယ် ဆိုရင်ကော ကျွန်တော်တို့ အခွင့်အရေး မရှိတော့ ဘူးလား? No ပါ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ ဒါကို ကြိုမတွေး ထားပါဘူး။ အနိုင်ရအောင်ပဲ ကြိုးစား သွားမှာပါ။ အခု ကျွန်တော်တို့ လာမည့် ပွဲအတွက် အဆင်သင့် ဖြစ်အောင် တစ်ဆင့်ချင်းစီ လုပ်နေ ပါတယ်။ ဒါဟာ ကျွန်တော်တို့ ကြိုးစား နေတာပါ။’
ကလော့ က လီဗာပူး အသင်းဟာ တိုးတက် လာအုံးမယ့် အပိုင်းတွေ ရှိနေ သေးတယ်လို့ ယူဆ နေပေမယ့်လည်း သူတို့ဟာ အသင်းရဲ့ အရည်အသွေးကို ပိုမို တိုးတက် စေနိုင်မယ့် ကစားသမား တွေကိုတော့ ၀ယ်ယူ နိုင်စွမ်း မရှိ်ဘူးလို့ ဆိုလိုက်ပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီး ကလော့က “ဒီအသင်းကို ပိုမို ကောင်းမွန် လာစေ မယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ ယူဆ ထားတဲ့ ကစားသမားတွေ ရှိပါတယ်။ သူတို့ဟာ တကယ့်ကို စျေးကြီးတဲ့ ကစားသမားတွေ ဖြစ်ပြီး ကျွန်တော်တို့ ငွေတွေ အများကြီး မသုံးစွဲ နိုင်ပါဘူး။ ဒီလူစာရင်းဟာ တကယ့်ကို ကောင်းတာပါ။ အကယ်၍ ဒီအသင်းကို တိုးတက် စေချင်တယ် ဆိုရင် အသင်း အတွက် မှန်ကန် သင့်တော်တဲ့ ကစားသမားတွေကို ခေါ်ယူရ ပါမယ်။ ဘယ်ကစားသမား မဆို ခေါ်ယူလို့ မရပါဘူး။
ဒီအသင်း ဟာ အကောင်းဆုံး အသက် အရွယ်မှာ ရှိနေ ပါတယ်။ ပြီးတော့ သူတို့ဟာ တိုးတက် လာအုံးမယ့် နေရာတွေ ရှိနေ ပါသေးတယ်။ ကျွန်တော့် အမြင် ကတော့ အခုချိန်ဟာ လီဗာပူး ပရိတ်သတ် တစ်ဦး အနေနဲ့ နေရတာ လွယ်ကူ ပါတယ်။” လို့ ဆိုလိုက် ပါတယ်။